IINGCINGA ZETATOO EZIPHEZULU EZINGAMA-91 EZIPHEZULU - [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELA] - UHLOBO
Iingcinga zeTatoo eziPhezulu ezingama-91 eziphezulu - [2021 Isikhokelo sokuphefumlela]
Ukubonisa unxibelelwano olusondeleyo necala elimnyama lokuphila, amadoda amaninzi athabatha ubukrelekrele obunobunono bokubulela kwii-tatoos zomzimba. Abafana baseGoth bayavuma ngamxhelo-mnye ukuba akukho nto ibetha inki ye-casket enobuqili!
Iitattoos zibonwa ngokubanzi njengombhiyozo wobomi, kodwa abalandeli abanobuqhetseba beshishini bayazi ukuba maninzi amadoda asebenzisa i-inki ukubonisa ukuthanda ukufa.
Ngelixa le meko ivuswe amatyeli aliqela kwixa elidlulileyo, uyilo olulungileyo lokugqibela luyinto engafakwanga kwinkcubeko ye pop. Nangona umtsalane uvela kwii-engile ezininzi, isiphumo esingapheliyo sesona sithintelo siqhelekileyo kunye nemifanekiso ekhoyo.
Ukuxhaphaka kwee-vampires kunye neZombi ngokuqinisekileyo kunegalelo ekuvuseleleni iitattoos zebhokisi, kodwa kukho inkcazo engaphezulu kunomboniso kamabonwakude. Ngapha koko, uninzi lwabantu lufumana le-inki ejijekileyo ejijekileyo ukwenza ikhonkco elimnandi kwiinkosi zoncwadi ezinjengeBram Stoker.
Zininzi iindlela zokubeka ubambo lwakho kwi tattoo yebhokisi. Imizobo yexesha lama-Victorian yayisoloko isaziwa, kodwa ungazama ngokoqobo zonke iintlobo zebhasikithi ezinomdla. Ukubona eminye imizekelo yokufumana ingqwalaselo, vele uskrolele phambili kwi-inki enesitayile sokufa kwinyama ephilayo!
umnyama kunye nobomvu umvambo wendabuko
Uyilo lwe-tribal tribal esandleni
tattoo encinci yamaphiko engalweni
Iimpiko ezintle nezimbi tattoo
imibuzo elungileyo yokwazi intombazana
Uyilo lwetayile ekhitshini yoyilo imibono yemifanekiso
Igama loyilo loyilo engalweni
Iivaranda ezincinci zangaphambili zokuthuka izimvo
izimvo zodonga olukhulu lwegumbi lokuhlala
izimvo zepatio encinci yasemva kwendlu